Ungayicheba njani intloko ngokuchanekileyo? | Amadoda aQinisekileyo
UManu RS | | Ukunyamekela
Xa umkhosi wawukho, omnye Ndafunda phantse ngokunyanzelwa ukucheba iinwele zakhe ukuya ku-zero ke kuya kufuneka alibale ngayo iiveki ezimbalwa de ikhule kwakhona. Ngapha koko, ngoku, xa uyindoda yasemkhosini, ikwayenye yeendlela ezilungileyo zokuba nembonakalo ebonakalayo ukuze ungadluli kumatshini rhoqo emva kwesibini.
Kodwa kwenzeka njani kobu bomi kubalulekile wazi amaqhinga ahlukeneyo okanye iingcebiso ukuze eli nyathelo lokususa iinwele liphezulu libushelelezi kwaye ngaphandle kwezona ngxaki zincinci. Ngamafutshane, siya kukufundisa ungayicheba njani intloko yakho kwaye kufuneka uyenze ngokuchanekileyo kwaye ngaphandle kokubeka i-scalp yakho emngciphekweni.
1 Izinto zokuqala kuqala: ezona zixhobo zilungileyo zokusika iinwele
1.1 🛒 Iingcebiso ngokuthenga isikliphu seenwele
2 📌 Phambi kokuqala ukusebenzisa umatshini
3 👨‍🦲 Ukupasa umatshini
4 📚 Iingcebiso zokucheba intloko
Izinto zokuqala kuqala: ezona zixhobo zilungileyo zokusika iinwele
Kubalulekile ukuba neqela elifanelekileyo nathi elinakho sinike ezona ziphumo zibalaseleyo. Kwaye njengoko kuhlala kusenzeka, singafikelela kumaxabiso awahlukeneyo, nangona inyani kukuba malunga ne- € 22 sinokufikelela kumatshini esinokusebenzisana kakuhle.
Singafikelela iRemington HC5030 I-23 Euro njengeyona ndlela inexabiso eliphantsi. Ukuba sele sinexabiso elifanelekileyo lemali sinenguqulo enkulu kunye neRemington HC5810 ye- € 47, kwaye ukuba sele sikwelinye inqanaba sinokuhamba ngePanasonic ER-1611 nge- € 123.
Ukuba ufuna imveliso efanelekileyo yokucheba intloko, nikela ingqalelo koku Ukukhetha imveliso.
🛒 Iingcebiso ngokuthenga isikliphu seenwele
Izinwele ezisikiweyo ezinokusetyenziswa kunye neenwele ezomileyo nezimanzi zinako kubaluleke kakhulu ngamaxesha ahlukeneyo kuyacetyiswa ukuba ujonge kule ndawo
Umatshini ngaphandle kweentambo iya kubonelela ngokuchaneka okungcono xa uyisebenzisa, kuba intambo inokungena endleleni. I-euro ezimbalwa ngakumbi kwaye siya kuvuma ukuthengwa kwale inje
Yiza ngezinto ezahlukeneyo ukuze ukusika kube lula kubalulekile nangona ingeyiyo into esisiseko
Izinto zeencakuba lolunye ukhetho olunokuthi luqwalaselwe
Ukuphelisa ubunzima bomatshini kunokucetyiswa ukuba kungabikho ngaphezulu kokufanelekileyo ukukwazi ukujongana ngcono nayo
Enye inkcukacha ekufuneka ithathelwe ingqalelo yile uthenga umsiki kwezona ndawo zinzima ezifana nokujikeleza iindlebe, intamo nebunzi. Kwiivenkile ezinkulu kukho izinto onokukhetha kuzo ngaphezulu kwe-20 euros.
📌 Phambi kokuqala ukusebenzisa umatshini
Ukuze yonke into ihambe kakuhle, kufuneka sikhathalele ukuba umatshini, ukuba ungomnye weengcali, uthambisile. Rhoqo ngenyanga okanye kwiinyanga ezimbini kubalulekile ukongeza ithontsi ukuze iincakuba zibe nezona ziphumo zibalaseleyo.
Enye ingongoma ebalulekileyo kukuba iincakuba zicocekile, ke kuyacetyiswa ukuba sizihlukanise phambi kokuba siqhubele phambili kusiko. Ezinexabiso eliphantsi zihlala zinendawo yokucoca ngohlobo lohlobo lweebrashi ezincinci ezenza lula umsebenzi.
Ngokubhekisele kwioyile, ngesiqhelo kwifayile ye- imiyalelo yomatshini iza ngendlela yokuyisebenzisa kwaye ukuba olo hlobo lomatshini luyayidinga ngokwenene. Njengoko benditshilo, ayizizo zonke ezikumgangatho ofanayo, ke ukugcinwa kwazo kuxhomekeke kwizinto ezininzi. Iingcali kufuneka zisebenzise ithontsi leoyile.
Ngaphambi kokuya kweli nqanaba kufuneka sicoceke kakuhle, ngoko kubalulekile ukuba siwele ukushiya imizuzu embalwa ngokungathi besikhuphe ebhokisini yayo okokuqala.
Xa sifake ithontsiNgoku kufuneka sivule umatshini kangangesithuba semizuzwana engama-20 ukuze uthanjiswe ngokufanelekileyo kwaye ulungele ukucheba iinwele.
👨‍🦲 Ukupasa umatshini
Ukuba sineenwele ezinde kakhulu, kuyacetyiswa ukuba sisebenzise elona nani liphezulu ukuba kufuneka siququzelele izinto, kuba ukuba siye kakhulu kwingcambu kunokuba nzima ngakumbi ukusika kwimizuzu embalwa.
Njengoko sele sisika zonke iindawo, sele sikhona siya ngqo ku-1 okanye ku-3 ukusika njengoko sinqwenela, kuhlala sikhetha ukuseta ukuba kubengu-0 ngaphandle kweenwele ngokupheleleyo.
Njengazo naziphi na iinwele, kuyacetyiswa ukuba yiya kwindawo yokwenza iinwele, kodwa ngenxa yexabiso eliphantsi koomatshini abathile, namhlanje umntu angonga imali elungileyo kula maziko angasuka kwi-6 ukuya kwi-18 euros kuxhomekeka kwindawo ohlala kuyo.
📚 Iingcebiso zokucheba intloko
Eyokuqala yile uneenwele ezicocekileyo, nokuba unayo inde okanye imfutshane. Ayisiyo yezempilo kuphela kodwa ibukeka intle, ngaphandle kwento yokuba iluncedo ngaphambi kokuyisika okanye, njengakule post, ukuyicheba.
Kubalulekile sebenzisa igusha yokucheba entloko kuyo yonke into ukunqanda ukucaphuka okanye ukwenzakala okunokwenzeka.
Kufanele si dlulisa isitshetshe kwimeko yokukhula kweenwele. Oku kwenza iinwele zincinci kakhulu, ukuze kwisithuba sesibini esilungileyo sibe sele sinqwenela ukuba njalo.
Ukuba sele siye kwelinye icala, siya kuba nalo ukulungele ukuyicheba kakuhle kanye njengoko sasifuna.
Lo kuqala ingaphambili, ke amacala kwaye ekugqibeleni singaya ngasemva ngoncedo lomntu. Apha ukuba nesipili esisesandleni kunye nesipili sangaphambili kwenza kube lula kuthi nokuba singadingi mntu kulo msebenzi. Umonde omncinci okoko ngemizuzu siza kuyilungisa.
Kubalulekile ukuba ube netawuli emanzi ukususa intsalela yamagwebu neenwele ezishiyekileyo. Into oyithethayo ukuba ishawa yasemva kwexesha iyangena ukuba ungashiyi igumbi lokuhlambela kunye neenwele ezibonakala zingenasiphelo
Sisebenzisa i- amafutha okuthambisa entlonzeni ayomisi okanye ayicaphukisi.
Inkqubo sizakuzama ukuyenza kwakhona xa sibona ukuba iqala ukukhula kakhulu.
Ngayo yonke loo nto ithethwayo, uya kuba neengcebiso ezilungileyo Cheba iinwele ngokufanelekileyo kwaye masingathathi nakuphi na ukusika okanye ukubetha okucaphukisayo xa sifuna ukuphuma kamva nabahlobo kwaye sonwabele ubusuku. Ke ungaphoswa kukuqeshwa ngaphambi kwezinye zezo ngcebiso sizisungula kuMadoda ngesitayile kwaye sithanda kakhulu ukuba sabelane kwaye sinike.
Ngaba uyazi ezinye iingcebiso ezinokuba luncedo xa kuziwa yichebe intloko? Khawusixelele ukuba wenza njani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ungayicheba njani intloko ngokuchanekileyo?
Emva kwexesha kodwa uluvo lwam luyahamba: ndineminyaka emi-4 ndicheba intloko.
1. Ndiyenza rhoqo kwiintsuku ezimbini, ukuba kufanelekile ngaphambili, ndiza kuyenza kwakhona.
2. Ndihlala ndiyenza ngasemva nangaphambili
3. Xa ndingenayo ikrimu ndisebenzisa isepha nje
4. Andikhe ndicaphuke
5. Ewe ndiye ndafumana iingozi zam, kodwa zincinci.
6. Kuluyolo ukuba nenkqayi, kwaye ndinenwele.
Ndiyawathanda amagqabantshintshi akho ndenza okufanayo
Kum kumnandi futhi ukuhamba nenkqayi kuba ndiya kuba nenkqayi
Ifome ngokufanayo kuba ndingu 23 kodwa ndicinga ukuba ndiyathanda ukuba nenkqayi
Khathalela i-loquillo hug kumgama
Ndinenkqayiba iminyaka, ngaphandle kwalonto ndinenwele ezithe tye kwaye zilungile ezenza ingxaki yam ibe mbi, ndifuna ukucheba okoko ndinomatshini, kodwa ndinamathandabuzo, ukuba bendisebenzisa u-0 okanye u-1? Okanye indibaniselwano? Ndineminyaka engama-24 ubudala 🙁
Ndineminyaka engama-25 kwaye ndingenaboya okoko ndandineminyaka engama-22 .. Yile nto ndiyithethileyo ndaza ndaqhawula! Bendingafuni ukuba injalo kodwa ke ndiyayithanda kwaye ndiyenza ngokwesiqhelo rhoqo kwiintsuku ezimbini okanye ezintathu rhoqo .. Kuqhelekile kwaye ndiyayithanda! Kukwenza uzive ulungile malunga nokuhoya kwakho umfanekiso! Kufuneka ube nethemba ... Ngamaxesha onke ubuso obubalaseleyo !! Yena yena
Ngelixesha undiphulula uOscar, besele ndichebe u-hehe, iyaguquguquka kwaye ikhululekile, ndinengxaki yenkwethu kwaye ndingenazinwele zonke zicocekile kwaye intloko yam iphilile sele ndichebe amatyeli amabini ngaphandle kuka "0" Incakuba yokucheba, inkangeleko intle, inyani kukuba, ndicinga ngokuhlala ndinjalo. Enkosi ngokuphendula.
Ndicheba amacala entloko okoko ndaye ndagqiba kwelokuba ndenze i-mohawk, kodwa ingxaki yam yile ilandelayo, kukusebenzisa i-razor eqhelekileyo (njengoGillette) kulungile okanye kufuneka ndisebenzise isitshixo sombane? Andinangxaki yokusebenzisa iGillette kodwa inzima kwaye iyacotha
Andikucebisi ukuthenga umatshini we-remington, bendinengxaki ukusukela kusuku lokuqala, ngamandla (asezantsi kakhulu) kunye nesiqwenga seplastiki esaphukileyo (esincinci). Ukuba uza kuyisebenzisela ubomi bakho bonke, yisebenzise imali yakho. Ukusuka kwi-euro ezingama-45. UBraun ukhuselekile. Umhlobo onempandla
Ndidla ngokucheba intloko, xa ndiyenza rhoqo kwiintsuku ezimbini ihamba ngcono kakhulu, xa ngasizathu simbe ingenjalo kwaye ndithatha iintsuku ezininzi, kuqala ngomatshini wokuxobuka nasemva kokucheba. MNe ndiyayithanda, ndiqhuba kakuhle. Kwakhona, ndiyacheba umzimba wam wonke.
Iibhatyi ezintlanu zokucheba zebhayisekile kobu busika